टोखामा इन्जिनियर श्रीमतीले श्रीमानको ज्या’न लि’इ’न्, आफुले पनि गरिन् देह त्याग ! – Wow Sansar
January 9, 2021 97
काठमाडौं । काठमाडौको टोखामा अनौठो घटना भएको छ । भर्खरै अमेरिकावाट नेपाल फर्किएका एक इन्जिनियर दम्पत्तीको रहस्यम मृत्युले स्थानिय बासीन्दा त्र सि त भएका छन् । उनीहरुको शव शुक्रवार राती स्थानियले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । काठमाडौंको टोखास्थित ग्रिन भिल्ला कोलोनीमा दम्पतीको शव फेला परेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा घटना रहस्यम देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रवार राति करिब ९ बजे दम्पती मृ’त अवस्थामा फेला परेका हुन् । पोष्टमार्टम रिपोर्ट पछि घटनाको वस्तविकता थाहा हुने भएपनि प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
ग्रिन भिलामा बस्ने ३३ वर्षीया सुदिक्षा गिरी र उमेश केसी रहस्यमय अवस्थामा फेला परेका हुन् । श्रीमतीले श्रीमानको ज्या’न लि’ए’र आफुले पनि देह त्याग गरेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रवक्ता डिएसपी प्रमेश विष्टले घटनास्थल रहस्यमय भएको बताए ।
घटनास्थलमा र’ग’त लागेका अवस्थामा सिलौटो फेला परेको छ । उमेशको परिवार अमेरिका बस्दै आएका छन् । उमेश केही समयअघि अमेरिकाबाट काठमाडौं फर्केका हुन् ।
Prevजुत्तामा भरेर राखिएका थिए ११९ जीवित दुर्लभ कीरा, डिब्बा खोल्दै उड्यो होश !
Nextअभिनेता श्री कृष्ण श्रेष्ठको नक्कल गरेर चर्चामा आएका युबकको दमदार प्रस्तुति हेर्नुहोस भिडियो